रौतहटमा लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेंगु रोगको बिरामी फेला | E-Highway News
रौतहटमा लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेंगु रोगको बिरामी फेला
रौतहटमा लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेंगु रोगको बिरामी फेला परेको छ । ज्वरो आएपछि उपचार गर्न चन्द्रपुर हस्पिटल प्रालीमा पुगेका चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नं. १ मंगलपुरका २७ बर्षिय प्रमोद सहनीलाई डेंगु देखापरेको हो । केही दिनदेखि ज्वरो आएर उपचारका लागि हस्पिटलमा आएका सहनीको स्वास्थ्य परीक्षणमा डेंगु रोग पुष्टि भएको चन्द्रपुर हस्पिटल प्रा.लीका प्रमुख डा. सुवास चौधरीले बताउनुभयो । थप उपचारका लागि सहनी काठमाण्डौ तर्फ गएको उहाँको भनाई छ । चन्द्रपुर हस्पिटल प्रालीमा उपचारका लागि आएका पाँच जनामा डेंगुको संक्रमण फेला परेको डा. चौधरीले बताउनुभयो । डेंगुको संक्रमण फेला परेको सुमित्रादेवी रौनियारको भने हस्पिटलमा उपचार भै रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सामान्य डेंगुका बिरामीले ४ घण्टामा पिसाब लाग्ने गरी तरल र झोल पदार्थ सेवन गर्दा धेरै राहत मिल्ने उहाले बताउनुभयो । उहाका अनुसार अलिअलि ज्वरो आएर जीउ दुख्दा औषधि पसल गएर आफैंले औषधि सेवन गर्नु खतरनाक हुन सक्छ । त्यसैले जीउ दुख्नु, उच्च ज्वरो आउनु र आँखाका गेडी दुख्नु डेंगुका लक्षण भएकाले तुरुन्त अस्पतालमा गएर परीक्षण गर्नु पर्ने उहाँको भनाई छ । डेंगु भाइरसले संक्रमित लामखुट्टेले टोकेको ३ देखि १० दिनभित्र शरीरमा यसको लक्षण देखिने र भाइरसबाट हुने डेंगु एक व्यक्तिबाट अर्कोमा नफैलिने चिकित्सकहरु बताँउछन्  । अहिले देशैभरि फैलिएको डेंगुको प्रसार सबैभन्दा बढी पोथी एडिस एजेप्टाई लामखुट्टेका कारण भइरहेको छ । एडिस एल्बोपिक्टस लामखुट्टेले पनि डेंगु सारेको पाइएकाले यस प्रजातिको लामखुट्टेले जिका, चिकनगुनिया र यलो फिभरसमेत सार्ने गरेको चिकित्सकले बताएका छन । बिहान र साँझको अस्ताउने बेलाको घामको समयमा डेंगु रोग फैलाउने लामखुट्टेले टोक्ने भएकाले त्यतिबेला सावधानी अपनाउन स्वास्थ्यकर्मीहरुले सल्लाह दिएका छन् । डेंगु रोग फैलाउने लामखुट्टेले सफा पानी अर्थात अक्सिजन भएको पानीमा फुल पार्ने र त्यो फुल झण्डै ६ महिनासम्म जीवित रहने भएकाले घरमा राखिएका खानेपानीका भाडा सधैँ सफा गर्नुपर्ने जिल्ला अस्पताल गौरले जनाएको छ।,
अदालतबाट आलमको म्याद सात दिन थप
Oct 15 2019 03 : 14am । 65
नेपाली काग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफ्ताब आलमको म्याद अदालतले सात दिन थप गरेको छ । राजपुर बमकाण्डका आरोपी आलमलाई अनुसन्धानका लागि प्रहरीले थप समय मागेपछि अदालतले सात दिन थप गरेको हो ।
हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका सांसद आलम निलम्बित
Oct 14 2019 07 : 10am । 15
हत्या आरोपमा पक्राउ परेका मोहम्मद अफताब आलम सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका छन् ।संसद सचिवालयले सोमबार सूचना जारी गरी आलम निलम्बनमा परेको जानकारी दिएको हो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४४ बमोजिम संसद सचिवालयले सोमबार सूचना टाँस गरेको हो ।
नेता आलम पक्राउ परेको विरोधमा नेपाली काग्रेस रौतहट आन्दोलित
Oct 14 2019 07 : 09am । 20
नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले आफना नेता मोहम्मद आफताव आलम पक्राउको विरोधमा रौतहटमा विरोध प्रर्दशन गरिरहेका छन् । चन्द्रनिगाहपुर, गौरको बसपार्क, सबगढा, राजपुर फरदहवा, जयनगर, कोपवा लगायतका स्थानमा आलम समर्थकले जुलुस सहित टायर बालेर विरोध प्रर्दशन गरिरहेका छन् । प्रर्दशनकारीले जिल्लाका केही स्थानमा सडक अवरुद्ध पारेका छन् ।
26 Sep 2018 05 : 53am । 2252
05 Oct 2018 07 : 04am । 1642
21 Sep 2018 06 : 54am । 1133